Ku noqo taageeraha PixelHELPER
Waxaan ahay PIXEL HELPER!
Xoogaa saar! Deeq-bixiyeyaashu waxay gacan ka geystaan ​​kicinta xanaaqa dadweynaha. U suurtogal mashaariicda farshaxanka xuduudaha ka gudba. Meel kale oo aad ka hesho ololeyaal intaa le'eg oo loogu talagalay xorriyadda farshaxanka iyo xuquuqda aadanaha ee euro kasta oo lagu deeqo sida annaga oo kale.
Ma jeceshahay inaad si qarsoodi ah noo taageerto maxaa yeelay haddii kale waxaad xabsi ku geli doontaa dalkaaga tabaruca ah? Awood-siinta iyo dowlad-goboleedyada diktaatooriga ah waxay ka dhigayaan wax aan macquul aheyn in laga qeyb-qaato. Fadlan isticmaal jeebkayaga dijitaalka ah, beddel ahaan u rog hoos una isticmaal qaabka tabaruca GLS ee caadiga ah:
Nuseir Yassin wuxuu kula kulmay PixelHELPER magaalada Berlin. Rubiks Cube oo laga keenay milkiiladeedii ugu horreeyay ee fiidiyaha waxaa hadda leh shirkadda PixelHELPER.
Ku qanci naftaada shaqadeena qiimaha badan ee ku saabsan warbixinnada waxqabadkayaga
Fadlan ku deeqaan by Paypal in paypal@PixelHELPER.tv ama isticmaal pixel xisaabta deeqaha Gargaare Foundation. Haddii aad rabto inaad isticmaasho kaarka deynta, isticmaal foomka deeqda hoose.
Kala xiriir xisaabta sida faylka qoraalka * .txt
DIIDMADA LAMBARIDDA WAXBARASHADA GAARKA AH EE LACAGTA
Deeqaha hay'adaha aan macaash doonka ahayn waxaa lagu dalban karaa kharash gaar ah ilaa qayb ka mid ah 20% dakhligaaga.
Kharashyadan khaaska ah waxay hoos u dhigaan dakhligaaga canshuuri kara haddii ay ka badiyaan tirada wadarta ee 36 Euro.
Lacagta deeqda la siinayo Euro 100 uma baahnid inaad soo gudbiso dukumintiyada taageeraya. Mas'uuliyadaha caddaynta ah ee waxtarka leh waxay ku xiran yihiin 200 Euro. Warqad wax ku ool ah ayaa ku filan.
Noqo mid geesinimo leh. Noqo mid weyn. Noqo marka koox yar oo dad ah ay riixdo isbedel weyn oo bulshada dhexdeeda ah.
Hel cadaadis & fiiro gaar ah - na taageer hadda! Deeq bixiye ahaan, waxaad kaalin wax ku ool ah ka geysaneysaa kicinta xanaaqa dadweynaha - adduun ka wanaagsan.
Iska hubi hadda iyo fadeexadda xuduudaha xuduudaha. Meel kale maahan inaad ka hesho rebellion iyo rebellion ah halkii Yurub oo dhan sida halkan.
Waxaad heli doontaa joornaal emayl oo leh ololeyaal hadda socda. Ma aragtaa in xuquuqul insaanka lagu tumanayo oo cidina aysan raadineynin? Waxaan sugeynaa taladaada! Kaaliye ahaan / deeq bixiye ahaan, waxaad haysataa fursad shaqsiyadeed iyo mid gaar ah oo aad uga mid noqon karto ololayaasha PixelHELPER. Ururkeenu wuxuu leeyahay xaalad aqoonsi aan faa'iido doon ahayn. Sidaa darteed deeq kasta waa cashuur dhimis.
KA HELI KARTAA!
E-Boostada xubnaha taageeraya: Oliver Bienkowski, oliver@PixelHELPER.org
XASUUSAHA SAFE AND SUSTAINABLE XUSUUSNOW PIXEL HELPER
Waxaan wax ku ool ah! Waxaan u shaqeynaa si ammaan ah oo daahfurnaan leh waxaanna sameynaa qalab maamul oo weyn.
Waxaan nahay qaylo! Iyada oo deeq-bixiyehaagu kuu oggolaanayo ololeyaal wax ku ool ah xuquuqda aadanaha.
Waan qabanay! Shaqadayadu waxay u baahan tahay sabir iyo neefsasho dheer. Ku-deeqidda joogtada ah waxaad naga caawineysaa inaan sii joogno!
Anaga ahaan, tabarucaad micnaheedu waa ...
PixelHELPER Foundation waa hay'ad samafal oo loo aqoonsan yahay inay gaar ahaan uqalanto.
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku siino risiit lacag ah.
Dabcan, deeq-lacageed joogto ah ayaa la bedeli karaa ama la joojin karaa wakhti kasta oon lahayn ogeysiis.
Iyada oo loo marayo deeq-lacageedka tooska ah ee xisaabteynta deeq-lacageedka ma bixineyno kharashka dayactirka.
Hay'adda PixelHELPER Foundation waxay si gaar ah iyo si toos ah sadaqooyin sadaqaysan ula socotaa macnaha qaybta "ujeedooyinka canshuuraha-mudnaanta leh" ee nambarka cashuurta. Waa laga dhaafay shirkadda iyo canshuuraha ganacsiga iyadoo la raacayo ogeysiiska ka-dhaafitaanka ee ay soo saartay Xafiiska Canshuuraha Magdeburg Janaayo 28, 2016, maxaa yeelay waxay u adeegtaa si gaar ah iyo si toos ah cashuur-mudnaanta samafalka iyo ujeeddooyinka wanaagsanaanta macnaheedu yahay f 51 ff. AO.
Ku noqo taageeraha PixelHELPER Febraayo 12th, 2021Oliver Bienkowski